Namoaka tatitra momba ny 'Stages of Opening for Istanbul' | RayHaber | raillynews
HomeTORKIAFaritra Marmara34 IstanbulNavoaka ny tatitra momba ny 'Lafatra fanokafana an'i Istanbul'
Ny fanavahana tena dia tsy fiverenana amin'ny lasa
Ny Birao Mpanolotsaina siantifika IMM dia namoaka tatitra momba ny 'Stages of Opening for Istanbul'. Ao amin'ny tatitra; Tiorka dia fampihenana ny isan'ny maty amin'ny ankapobeny; na izany aza, voalaza fa tsy misy angona mahasalama momba an'i Istanbul. Ny tatitra dia nanolo-kevitra fa ny fanapahan-kevitra hiakatra any amin'ny dingana manaraka ny fanodinana ara-dalàna aorian'ny fandinihana roa herinandro.
Ao amin'ny tatitra nataon'ny komity siantifika IMM, ireto fomba fiasa manaraka ireto dia nanonona ny maha zava-dehibe ny lalàm-pahanginana amin'ny fampahafantarana matetika ny fiaraha-monina.
MANAO ZAVA-FANAVOANA ARY VOLANA
"Nisy dingana iray tratra tamin'ny aretin'i COVID-19. Ny fizotry ny fiverenana amin'ny fiainana ara-dalàna dia tokony hatsangana tsikelikely, eo amin'ny firenena sy eo an-toerana ary mifanaraka amin'ny fitsipiky ny siansa momba ny fahasalamam-bahoaka ary tsy tokony handalo raha tsy mahafeno fepetra sasany amin'ny alàlan'ny fanombanana tsara ny dingana tsirairay mankany amin'ny fampifanarahana amin'ny fanavaozana vaovao.
Ny zava-tsarotra hisedra ny fanarenana indray dia mitondra ny loza ateraky ny fitomboan'ny tranga COVID-19. Noho izany antony izany, ny dingana rehetra dia ilaina indrindra mba tsy handaniany fotoana sy ezaka atao mba tsy hiverenany any aoriana.
Ny isan'ireo tranga vaovao izay nodinihina mandritra ny fisokafana dia tokony hojerena tsara ary ny dingana vaovao dia tokony horaisina amin'ny fijerena ny vokatry ny fisokafana. Amin'izany toe-javatra izany, ny fisokafana, izay amin'ny sehatra lehibe, izay mety hisy fiantraikany amin'ny masobe dia tokony hotanterahina tsikelikely, aorian'ny fanaraha-maso mandritra ny roa herinandro, ny dingana manaraka dia tokony halefa mba hahitana mazava ny vokatry ny dingana tsirairay. Ho fanampin'izany, ny famadihana dia tokony ho dingana roa miaraka ary raha ilaina dia mihemotra haingana.
Ny fanokafana dia tokony hanomboka amin'ny hetsika mety hampidi-doza farany, ny faritra ambany haben'ny mponina ary ireo sokajin-taona ambany indrindra mety hampidi-doza. Noho izany, ny voalohany dia tokony hanomboka ny fampiasana sehatra eny amin'ny daholobe amin'ny alàlan'ny fankatoavana ny fitsipi-pitondran-tena (1 metatra Meter), fa amin'ny lafiny iray kosa, ny toerana misy fifandraisana ambony toy ny trano fisakafoanana, trano fisakafoanana, sekoly, ny fivarotana vokatra tsy ilaina dia avela ho daty aoriana.
ISTANBUL INDRINDRA INDRINDRA INDRINDRA
Istanbul dia tokony hanana fandaharam-panokafana misaraka, toy ny metropolis miaraka amin'ny mponina marobe ary ny faritany izay voakasik'ilay valan'aretina. Ao amin'ity tatitra ity, izay manombatombana ny fizotry ny fanokafana manokana ho an'ny faritany Istanbul, dia mikendry ny haminavina ny dingan'ny faritany amin'ny alàlan'ny fitsipiky ny siantifika natolotry ny fikambanana mahay sy ny tontolon'ny siansa.Ny isan'ny tranga tao Istanbul dia 1 isan-jaton'ny fitambaran'ny tranga tamin'ny volana voalohany (10 aprily) ny fipoahana. naneho. Ny isan'ny tranga ankehitriny dia tombanana amin'ny 60 isan-jato.
NY TONTOLO ALOHA MITOMPIHAZANA AZONAO
Ny World Health Organization dia namaritra fitsipi-pifehezana enina mba hanombohana ny fanesorana ireo fameperana lehibe. Ny firenena dia tsy maintsy mahafeno ireto fepetra manaraka ireto:
1. Porofo fa voafehy ny andalana COVID-19.
2. Ny fahafaha-manaon'ny rafitra ara-pahasalamana sy ny fahasalaman'ny daholobe ho an'ny fitsirihana, fitokanana, fitsapana, fanaraha-maso sy fanamafisana
3. Manamaivana ny mety hisian'ny fipoahana ao amin'ny tontolo misy fahatsapana avo lenta - trano fikolokoloana, trano fitaizana ireo olona sembana ara-tsaina,
4. Ny fepetra fiarovana dia misy ny halaviran'ny vatana, ny fanasan-tànana, ny fahadiovana ny fisefoana ary ny fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny vatana no ampiharina amin'ny toeram-piasana
5. Mitantana ny loza mety hitranga avy amin'ireo vondron'olona misy otrikaretina avo lenta.
6. Ny vondrom-piarahamonina manana feo sy fahazavana amin'ny famadihana, tafiditra ao anatin'ny dingana sy fandraisana anjara
MITADIAVITRA NY FIKAMBANANA NY FIVAROTANA SY NY TOERANA NY FIKOTANA.
Ho an'i Istanbul, izay voalaza fa manana 60 isan-jatony amin'ireo tranga tena izy, dia zava-dehibe tokoa ny fampahafantarana ny governemanta any an-toerana amin'ny famerenana indray sy hahazoana ny heviny. Ireo angon-drakitra mazava sy marina araka ny famaritana tranga mety ho an'ny OMS dia tokony homena isan'andro any Istanbul, ary toy izany koa dia tokony ho an'ny tanàna hafa.
Ny fiarahamonina dia toe-javatra manan-danja amin'ny fanokafana indray dingana ary tsy tokony hohadinoina fa hovolavolaina amin'ny fihetsiky ny olona eo amin'ny fiaraha-monina. Tokony ho fantatry ny fiaraha-monina fa ny dingana fanokafana dia tsy dingana iray izay miverina amin'ny vanim-potoana talohan'ny valan'aretina, ny fepetra rehetra azo ampiharina mandritra ireo dingana, ary ny negativitiana hipoitra mandritra ny dingana fanokafana dia hamadika ireo dingana ireo.
Rehefa voafaritra ny ambaratonga dia tokony hizara amin'ny fokonolona ary tokony avela handray anjara ny fiarahamonina. Ny antony / antony handraisana ny fepetra dia tokony hazavaina ary antenaina fa hanaraka ny ambaratonga. Ny fahazoana daty marina fotsiny raha tsy manazava ny fifandraisana misy ny antony no mahatonga ny fanantenan'ny olona hitombo. Zava-dehibe tokoa ny fanekena ny fiarahamonina ho ampahany amin'ny fizotrany sy handray anjara amin'ny fizotrany ary hahatsapa tsara ny fizotran'ny tetezamita.
Amin'ny dingana fanavaozana dia tena zava-dehibe tokoa ny fanohanan'ny vondron'olona sy ny fanarahana ireo orinasa. Raha jerena hoe inona ny olana no jerena ary inona avy ireo lafin-javatra nosokafana, ireo teboka ireo dia tokony hozaraina amin'ny vahoaka mangarahara. Rehefa tsy ilaina ny fanazavana; fisalasalana, fanahiana, fihetsika mampidi-doza, fanaparitahana vaovao diso, finoana ny fampahalalana tsy marina. Noho izany, ny fenitra fanokafana sy ny dingana dia tokony mangarahara.
Tena zava-dehibe fa ny haavon'ny elanelana ara-batana sy ny fahadiovana eo amin'ny toeram-piasana eny an-toerana izay anaovana ny fanokafana dia tanterahan'ny mpitandro ny filaminana ary ny famonoana heloka bevava ataon'ny orinasa tsy manatanteraka ny fepetra dia ampiharin'ireo tompon'andraikitra eo an-toerana. Ity dingana ity dia tsy mety afa-tsy amin'ny fiaraha-miasa sy fiaraha-miasa ataon'ny tompon'andraikitra eo an-toerana miaraka amin'ireo mpitantana eo an-toerana.
NY FANDAHARANA NY TENY TAMINY tany ISTANBUL
I Tiorkia voafidy amin'ny ankapobeny momba ny fanampian'ny Istanbul izay mamaritra ny angon-drakitra sasany saika tsy misy angon-drakitra.
Ny angon-drakitra voafetra voafetra izay nandinika momba ny fitsipi-pifehezana nomena tamin'ny fanombohana hatramin'ny fiandohan'ny tapaky ny volana aprily, ny isan'ny tranga vaovao tany Torkia tamin'ny fiandohan'ny volana Mey, saingy nampiato ny fipoahan'ny herinandro faha-2 fitomboana izany.
ny fihenan'ny isan'ny maty izay ny fitsipi-pifehezana hafa, i Tiorkia dia tsy hita ao amin'ny data ankapobeny momba an'i Istanbul. Na izany aza, araka ny fanombanana natao tamin'ny antontan-taratasin'ny IMM Directorate of Cemeteries, dia nihena ny isan'ny maty tao Istanbul tao anatin'ny 14 andro farany. Tsy fantatra ihany koa ny hivezivezy marary eo amin'ireo matihanina ara-pahasalamana voalaza ao anaty mari-pahaizana iray hafa.
Nahoana no 2013 handray anjara amin'ny Railtex 10!
Red Brigades dia namoaka fanambarana manohitra ny lozam-pifamoivoizana an-dalambin'i Lyon-Torino
Navoakan'i Alstom ny fampisehoana an-tsary ho an'ny firenena
Navoakan'i UTİKAD mpitari-dalana ny fitoeran'entana
Hook 50.Yem dia nankalaza ny boky voalohany amin'ny teny Tiorka momba ny Tattooing
Famoahana ny tatitra momba ny sehatra fitadiavam-bidy momba ny sehatra fitantanam-bola
Ny Kayseri Transportation dia namoaka fanambarana ho an'ireo zavatra adinoina eny amin'ny fiaran-dalamby
Navoakan'i Moovit ny tatitra 2016 Global Public Transportation Report
Burulaş namoaka taratra Bursa Yunuseli
Yandex Navigation Navoaka ny Traffic Traffic Analysis
Ny TCDD dia mamoaka ny Hemzemin Geçit Animation
TCDD Transportation Inc. Navoakan'ny Fitsipika momba ny Fampiroboroboana sy ny Fanovana ny Lohateny
TÜVASAŞ 43 mpiara-mitory amin'ny famoahana am-bavany
UTİKAD namoaka tatitra E-Commerce
Navotsotry ny ministera ny tatitra momba ny lozam-pifamoivoizana Xorlu 416 Andro taty aoriana
Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fahasalamana
Across manerana an'i Turkey
Ainga ny fanavaozana ny fanaintainana aorian'ny fampiroboroboana
Manao tatitra momba ny rafitry ny trambus malaza Ejipsiana Malatya
Ny Anjerimanontolon'i Istanbul dia nanomana tatitra momba ny tranobongo tao Yanik